Apple dia nanakana tamin'ny fomba ofisialy ny iMac Pro | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny 7 martsa, nampahafantarinay anao ny Fanombohana ny faran'ny iMac Pro, solosaina natolotr'i Apple tamin'ny fikirakira fototra ihany ary nanamafy ny orinasa fa mikasa ny hanavao. Roa herinandro taty aoriana dia efa ny iMac Pro lany tahiry amin'ny ankamaroan'ny Apple Store. Nandritra ny ora vitsivitsy, efa tsy misy ao amin'ny Apple Store an-tserasera.
Nandritra ny ora vitsivitsy, nanjavona daholo ny firesahana ny Apple iMac Pro amin'ny ankamaroan'ny tranonkala Apple erak'izao tontolo izao, toa an'i Spain, United Kingdom ary Etazonia. Toa ny fanamafisan'ny ofisialy an'i Apple ny famaranana ity modely ity no namela azy hanala ny tahiry rehetra amin'ny fotoana firaketana.
Raha manana rohy mankany amin'ny tranokala misy ny tranokala naseho an'ity fitaovana ity ianao dia ho tonga ianao natodika tany amin'ny tranokalan'ny Apple. Ho fanampin'izany, tsy aseho ao amin'ny lisitry ny solosaina Mac izay anoloran'i Apple antsika amin'izao fotoana izao amin'ny fipihana eo an'io faritra io eo amin'ny baran'ny menio ambony. Nanjavona daholo ihany koa ny referansa rehetra momba ny fitaovan'ny iMac Pro.
Rehefa nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny tsy fanavaozana ny laharana iMac Pro i Apple, tsy afaka nividy ilay maodely fototra fotsiny ianao, raha tsy manana ny safidy hanatsarana izay singa ao amin'ilay fitaovana, izany hoe, nanana ny safidy fotsiny izahay hividy ilay maodely fototra izay 5.499 XNUMX euro ny vidiny.
Na dia tian'ny olona aza ny hevitry ny iMac Pro, indrindra ny lokon'ny fitaovana sy ny kojakoja rehetra, ary somary avo ny vidiny, maro ireo mpampiasa natoky an'ity vahaolana Apple ity.
Na izany aza, tao anatin'izay taona faramparany izay, ny safidin'ny fikirakira ny laharan'ny iMac nampitovina tamin'ity modely ity, noho izany dia nijanona tsy nisy dikany ny fanohizany azy io eny an-tsena, noho izany Apple dia nandray ny dingana lojika amin'ny fampitsaharana azy ary tsy manavao azy ho an'ny taranaka faharoa.
Azo inoana fa amin'ny volana ho avy ny sasany amin'ireo modely ireo Mety hiafara amin'ny fiverenako any amin'ny Apple Store aho, Manokana ilay faritra nohavaozina, saingy tsy azo inoana izany, satria aleon'i Apple manary azy ireo amin'ny alàlan'ny mpivarotra.
Ny tena mazava dia ireo mpampiasa natoky an'ity fitaovana ity ary nandany mihoatra ny 5.000 euro izay vidin'ny kinova mora indrindra, tsy ho nanao tsara azy ireo izany jereo ny fomba nanjanonan'i Apple ny fitaovanao lafo vidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia nanakana tamin'ny fomba ofisialy ny iMac Pro
Ny "Music Next" an'i Apple Music dia mandeha iraisam-pirenena miaraka amin'ireo mpanakanto vaovao
Apple dia nanameloka handoa 300 tapitrisa dolara noho ny fanitsakitsahana ny patanty DRM